काँग्रेसलाई खुला पत्र– मन्सुर जस्ता नेताहरुले ठाउँ पाएसम्म कसरी हुन्छ तराईका जनतालाई न्याय ? कसरी बन्छ काँग्रेस ?
‘उष्ण’ हावा–पानी भएको तराईमा रुखहरु ठूला र मोटा हुनु पर्ने हो, तर किन भाँचिए रुखहरु ? कहाँ छ काँग्रेसी लोकतन्त्रमा जवाफदेहिताको स्थान ?
| 2017-12-11 Published
निर्माण सञ्चार, तराई चर्चा । नेपाली कांग्रेसका दुई प्रभावशाली नेता विमलेन्द्र निधी र फरमुल्लाह मन्सुरको लाज्जपद हारले यतिखेर तराईको काग्रेसी राजनीतिमा चर्चाको विषय बनेको छ ।
तराई मधेशमा मत पाएर सत्ता र भत्ता पाउने सोचका साथ अगाडि बढेका फरमुल्लाहको फर्मुला (सूत्र) पनि फेल भएको छ निधीको नियतिमाथि पनि कालो बादल लागको छ ।
सधैजसो ‘पावर र पैसा’को केन्द्रमा रहने बानी नै परेको यी दुई दिग्गजले तराईमा किन हारे ?
तराई–मधेसको अध्ययन पछि के भन्न सकिन्छ भने, यहाँको जनताको नजरमा असन्तुष्टिको तह कुन स्केलमा छ भन्ने नै यी दुई नेताले विश्लेषण गर्न नसकेको एकथरीको भनाइ छ ।
तराई–मधेशमा काम नगरेको व्यापक चर्चाकै बीचमा भएको चुनाव उनीहरुका लागि ठूलो मूल्य चुकाउनुको कारण बनेको छ ।
धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उठेका नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधी राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोसँग झन्डै ३ हजार मत कम ल्याएर पराजित भए ।
महतोले ३० हजार ७४२ मत प्राप्त गरेका थिए भने निधीले २७ हजार ८२८ मात्र मत पाएका थिए ।
त्यस्तै बारा क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधी सभा सदस्यमा उठेका नेपाली कांग्रेसका नेता फरमुल्लाह मन्सुर संघीय समाजवादी फोरम नेपालका जिल्ला अध्यक्ष रामबाबु कुमार यादवसँग ५ हजार २५० मत कम ल्याएर पराजित भए ।
काग्रेशको गढ मानिएको यस क्षेत्रमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार अदयानन्द पाण्डे भन्दा मन्सुर निरन्तर पछाडि रहेका थिए ।
एमालेलाई मधेश विरोधी भन्दै प्रचार गराउने मन्सुरलाई एमालेकै पाण्डेले २ सय ७६ मतले पछाडि पारे ।
यो रोचक भिडन्तले के देखाएको छ भने दोष लगाउन सजिलो छ तर जनताले पुष्टि नभएका कुरा अब बुझ्न सक्ने चेतना भएका रहेछन् भन्ने देखिएको छ ।
जनताले यादवलाई पहिलो, पाण्डेलाई दोस्रो र मन्सुरलाई तेस्रो स्थानमा राख्यो । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका रामबाबु कुमार यादव २१ हजार ३ सय ३६ मत पाएर विजेता बने ।
मन्सुरको ह्याट्रिक गर्ने सपनामाथि लाग्यो ठेस
०५६ सालमा बाराको क्षेत्र नम्बर ४ बाट सांसद बनेका मन्सुर ०७० सालको चुनावमा १० हजार ४ सय ५६ मत ल्याएर विजयी बनेका थिए । उनी ०५६ सालदेखि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य छन् ।
अहिले संसदीय बोर्डका सदस्य पनि छन् । मन्सुर ०६४ सालमा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पनि बनेका थिए । ०७४ सालको जेठदेखि श्रम तथा रोजगारमन्त्री नै छन् । उनी बहालवाला मन्त्री हुन् ।
यस क्षेत्रका जनताको नजरमा उनी ०५६ सालदेखि नै पावरमै छन् । जनताले जे देख्छन् सोही भन्छन् ।
निर्माण सञ्चारसँगको साक्षात्कारमा नेपाली काँग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘उनी लामो समयदेखि लगभग २ दशकदेखि पावरमा छन् भन्ने सबैले देखेकै कुरा हो ।
सत्ता र भत्ताको केन्द्रमा रहने तर आफ्नो क्षेत्रमा भने केही नगर्ने कुराले यतिबेला उनीमाथिको आक्रोश पनि चुलिएकै थियो । त्यसको उनले ख्याल गरेनन् ।
यस क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेजस्तै शिक्षा, स्वास्थ, यातायात, रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा उनले कुनै कामै गरेनन् भन्दा फरक पर्दैन ।’ यसैले हार व्यहोर्नु परेको उनको भनाइ छ ।
नेताज्यू आचार संहिता विपरीत भोज भतेर र मेनपावरसँग रकमै असुल्दै खाडीमा युवा फसाउँदा कहाँ थियो इमान ?
चालू निर्वाचनलाई विभिन्न जिल्लामा विभिन्न निकायले अनुगमन गरिरहेका थिए । बारा जिल्लामा पनि विभिन्न निकायले अनुगमन गरेका रिपोर्टहरु बाहिर आएका छन् ।
बारा जिल्लाका सक्रिय एक प्रत्रकारले मन्सुरको बारे निरन्तर कलम चलाइरहेका छन् ।
उनका प्रतिक्रिया र रिपोर्टहरु समाजिक सञ्जालमा पछिल्ला दिनमा भाइरल बन्दै गएका थिए ।
मन्सुरले आचार संहिता उल्घन गर्दै भोजभतेर गरेको, मौन अवधिमा भोट माग्ने गरेको, रकमको भरमा भोट खरिद गरेको, मधेस आन्दोलनको क्रममा कलैया नपसेको, मेनपावरसँग मोटो रकम लिएर ३५ जना युवालाई खाडीमा फसाएको स्टाटस उनले सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरेका थिए ।
मन्सुरले यस्ता व्यवहार न त आफूले सच्याएको पाइयो । न खाडी मुलुकमा युवाहरुलाई विभिन्न मेनपावरसँगको मिलेमतोमा फसाएको भन्ने आरोपको पनि खण्डन गरेको नै पाइयो ।
यसबारे स्थानीय युवाहरुले पनि मन्सुर प्रति नकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् ।
चुनाव लगत्तै स्थानीय जनमानसको राय बुझ्दा के पाइयो भने, जनताले आशा गरेका नेताहरु जनतामाथि शासन र शोषण गर्न कतिसम्म तल गिरेका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
नेताज्यूहरुले आफूलाई कामउ धन्दाको नाइके र जनताको प्रतिको जवाफदेहिता कम भएको देखाउँदा जनताले पनि आउला नि हाम्रो पालो भनेर दिन गनेर बसेका हुन्छन् भन्ने पनि हेक्का राख्ने पो हो कि !
गैरजिम्मेवारीको पाराकाष्ठा !
तालुकदार मन्त्री मन्सुरले जवाफ दिनै पर्ने यस्तै घटना हो स्वर्गीय अष्टमी गुरुङको बलात्कार काण्ड । बहुचर्चित कार्यक्रम ‘सिधा कुरा जनतासँग’मा पछिल्लो समय मन्सुरको चर्चा निकै चलेको थियो ।
स्व गुरुङको बलात्कार गर्ने बंगलादेशी नागरिक विरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै संसारभरका नेपालीले सामजिक सञ्जालमा अवाज उठाइरहेका बेला श्रम तथा रोजगारमन्त्री रहेका फरमुल्लाह मन्सुरले भने आफूलाई जानकारी समेत नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
यसले कांग्रेसी नेताको गैरजिम्मेवारीको पारकाष्ठालाई घामझैं छर्लङ्ग पारेको त छ नै ।
जनताको जिउधनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा राज्यको तालुकदार मन्त्रीको जवाफदेहिताहीनताले जनताल आफैं लज्जित महसुुस गरिरहेका थिए ।
दाङमा खनाल र न्यौपानेले पैसा बाँडेको सनसनीपूर्ण भिडियो अर्थात् काँग्रेसको असली मुहार !
सफल सेरपाली नाम गरेका फेसबुकबाट यही मंसिर १८ गते रातको २ बजेर ७ मिनेटमा एउटा भिडियो अपलोड भयो ।
‘रातिराति दाङमा कांग्रेसका उम्मेदवार राजु खनाल र भरत न्यौपानेले पार्टी प्रवेशको नाममा एक हातले माला लगाउदै अर्को हातले पैसा बाँड्दै’ भन्ने शीर्षकको त्यो भिडियो भाइरल बन्यो ।
भिडियो अपलोड हुने बितिकै उक्त भिडियो भाइरल भयो ।
कतिले लाइक गरे, कतिले कमेन्ट र धेरैले त सेयर नै गरे । त्यस भिडियो माथि विभिन्न कोणबाट विचार र विश्लेषणहरु आए सामाजिक सञ्जालमा ।
सो भिडियो बारा जिल्लमा पनि भाइरल भयो ।
अधिकांश जनताले मन्सुरलाई भोट नदिने एउटा कारण मध्ये यो पनि एक बन्न पुग्यो । किनकि काँग्रेसले के गर्दाे रहेछ र कतिसम्म गिर्दाेरहेछ भन्ने काँग्रेसको असली चेहरा दखाइदिएको थियो त्यो भिडियोले ।
लोकतन्त्रमा जनता बलियो बनाउने दलले यस्ता काम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनी चोकचोकमा युवाहरुले बहस गरे । धेरैले सुेनन् होला, तर नबोले पनि मत दिएर देखाइदिने ठाउँमा जनता थिए भन्ने कुरा काँग्रेसले बुझेन ।
उक्त भिडियो यतिबेलासम्म १ सय ७५ ओटा प्रतिक्रिया, २ हजार ७ सय सेयर, ५ सय ५३ ओटा लाइक र २ लाख ११ हजार भ्युअरले पछ्याएको देखिन्छ ।
मन्सुरको देखाओटी माया, काम लागेन
उनले आफ्नो क्षेत्रका जनतालाई कतिसम्म झूठका खेती गरे भन्ने कुरा उनको राजनीतिक करिअरको सिंगो पाटोको सपाट विश्लेषण गर्दा सग्लो तस्वीर आँखा अगाडि आउँछ ।
जहिले पनि चुनाव आउँदा मात्र विकासे नारा र एजेन्डा लिएर मैदानमा आउने मन्सुरको ढाँट अब अति भइसकेको जनताले महसुस गरिसकेका थिए । उनका विकासे नारा यतिबेला जनताले सुन्न चाहेनन् ।
किनकि, विगतमा उनले गरेको वाचा पूरा गर्नु परै जाओस् कतिपय ठाउँका मतदातासित भेट गर्न समेत पुगेनन् उनी । यसकै उदाहरण हो बाराको डोम बस्ती, जहाँ कुनै पनि दलका उम्मेदवारहरुको आँखै पुगेन । मन्सुरको पनि ।
जहाँ जनता छन्, तिनलाई राज्य पनि छ र ? भन्नेजस्तो अवस्था छ ।
लोकतन्त्रमा दलहरुको जवाफदेहिता चाहिन्छ कि चाहिन्न ? यो प्रश्नको जवाफ अबका सबै राजनीतिक दलहरुले दिन आवश्यक छ । यो चुनावको सन्देश यो पनि एउटा हो । जनताले अपेक्षा गरेको नेता जनताको सपना अनुसारकै आदर्श बन्न सक्छ कि सक्तैन, आजको बहसको केन्द्र यही हो ।
(अघि पछि त नेताहरु मोजमस्ती र झगडामै बिताउँछन्, तर चुनावका बेला त्यस्तो गरिब बस्तीमा त पुग्नु पथ्र्याे नि ! आवश्यक भिडियो तथा समाचारको लिंकहरु समेत प्रयोग गरिएको यो फिचर बारा जिल्लाको वस्तुगत अवस्थालाई अध्ययन गरी तयार पारिएको हो, सम्पादक ।)
बाराबाट राजु शाह कानु
सोमबार, २५ मंसिर, ०७४